screensaver အတုလေး ရေးရအောင် | our notes for our youngers
screensaver အတုလေး ရေးရအောင်	Filed under: Program လေးတွေ ရေးကြရအောင်... — Tags: .NET, C#, exercise, programming — sevenlamp @ 12:16 PM ကျွန်တော်တစ်ခု စဉ်းစားမိတာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတူတူ C# program လေးတွေ ရေးကြရအောင်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်က ရေးပြီးသား exe file လေး တင်ပေးမယ်။ ညီတို့က အဲ့ဒီ exe file လေးကို run ကြည့်ပြီး။ အဲ့ဒီ result အတိုင်းထွက်အောင် ကြိုးစားပြီး program ရေးကြည့်ကြပါ။ တစ်ပါတ်ကြာရင် ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ program ကို ပြန်ရှင်းပြပြီး source code တင်ပေးပါ့မယ်။ ကြားထဲမှာ ညီတို့ ရေးတဲ့ program ကို ကျွန်တော် email ကို ပို့ပေးရင်လည်း ကျွန်တော် စစ်ပေးပါမယ့်။ ဒီလို လုပ်ခြင်း အားဖြင့် ကိုယ်တိုင် လေ့လာတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးလည်း ရသွားမယ်။ program လည်း ရေး ကျင့်ရသွားမယ်ပေါ့။
Thanks for this post and waiting for so many exercises as you can.
Comment by Nway73 — October 30, 2009 @ 9:12 AM Reply	sure i will, also hope you to try it.
Comment by sevenlamp — October 30, 2009 @ 9:51 AM Reply	အစ်ကိုရေ လာလည်သွားတယ်နော်……….. ခုမှလိုက်ဖတ်ရုံပဲရှိတယ် ဘာမှမသိသေးဘူး .. နားလဲမလည်ဘူးဗျ ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်…ရေးတတ်လာရင် ပျော်ဖို့ကောင်းမဲံ့ပုံပဲ ဟီ……..ဟီဟီ …လုပ်တတ်ချင်တယ်….ံနေ့တိုင်းလာလည်မယ်နော်..
Comment by zarkamorhays — January 5, 2011 @ 11:22 AM Reply	ဒါနဲ့အစ်ကို အီးမေးအကောင့် သိလို့ရမလားဟင်
Comment by zarkamorhays — January 5, 2011 @ 11:23 AM Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI
Han shin thant on basic of C# (part 2)Ye Min Sein on basic of C# (part 5)Anonymous on basic of C# (part 5)Oo Ko on Simple Book Store (Part 1…Anonymous on Create your own Calendar from…	Charity4Human